Rodhocetus - Amanani kunye namanani
UDodhocetus (isiGrike esithi "i-Rodho whale"); ebizwa nge-ROD-hoe-SEE-tuss
Amaphekula ase-Asia ephakathi
I-Ecoene yasekuqaleni (iminyaka eyi-47 yezigidi edlulileyo)
Ukufikelela kwii-10 ubude ubude kunye namawaka angamawaka
Iintlanzi kunye nama-squids
I-snout encane; emilenzeni ende
Ukuguqula inkokheli ye-dog efana nenja yePuicetus kwiminyaka eyizigidi ezimbalwa, kwaye uya kugqitha into enjengeDodhocetus: isilwanyana esikhulu, esilungeleleneyo, esichitha ixesha elininzi emanzini kunokuba umhlaba (nangona Ukunyuka kweenyawo ezinqamlezileyo kubonisa ukuba uRodhocetus wayekwazi ukuhamba, okanye ubuncinane ukuzitshibela emhlabathini oqinileyo, ixesha elifutshane).
Njengobungqina obuninzi bokuphila kancinci olwandle olulandelwa yimikhomo yangaphambili ye- Eocene , amathambo aseHodhocetus awazange agxothwe ngokupheleleyo, okwakwenza ukuba kube lula ukuguquka xa ubhukuda.
Nangona engaziwa njengezihlobo ezinjenge- Ambulocetus ("i-whale yokuhamba") kunye nePakicetus ekhankanyiweyo ngasentla, uRodhocetus ungomnye wezona zinto zigqwesileyo eziqinisekisiweyo, kwaye ziqondwa kakuhle, iimbumba ze-Ecoene kwiirekhodi zezinto eziphilayo. Iintlobo ezimbini zezilwanyana ezincinci, i R. kasrani kunye no R. balochistanensis , ziye zafunyanwa ePakistan, indawo efanayo ngokubanzi njengamanye amanqabileyo asekuqaleni (ngenxa yezizathu ezisekhona eziyimfihlakalo). R. balochistanensis , efunyenwe ngo-2001, inomdla ngokukhethekileyo; Izahlulo zalo zincinane ziquka ubuchopho, isandla esinamacala amahlanu kunye nomlenze onozinyo ezine, kunye namathambo omlenze awakwazi ukuxhasa ubunzima obuninzi, ubungqina obuninzi beli lizilwanyana eziselwandle.
Amazwi NgoLeviyathani, iWhale Prehistoric Whale
Iminyaka eyi-150 yezigidi ze-Marsupial Evolution
I-Volcano Recipes - Unayo izithako zeViksikhi yeChimikhali
Iimpawu zeMariya Intombi kunye neMimangaliso eVailankanni, eIndiya
Isikhokelo sokusebenzisa i-TClientDataSet kwi-App Delphi
Ukugcina kunye nokukhusela iiNtsapho zeHlabathi kunye noNondyebo
Ukuzivocavoca ekuKhankeni iNgcaciso engapheliyo
Abaxhamli be-Lincoln Assassination